आयौं हामी चारतारे बोकेर, जय नेपालको सलाम ठोकेर’ बोलको गीतको म्युजिक भिडिओ सार्वजनिक
प्रेमगन्ज’ फिल्मको ‘तरबार’मा बेनिशाको मनमोहक नृत्य⚡सडक स्तोरन्तर सँगै यात्रुलाई सास्ती जिम्मेवार को ?"⚡दुइदिने एचआर कार्निभल आयोजना हुने⚡रामेछाप कि सुमिता तामाङको साइप्रसमा उपचार कै क्रममा निधन।⚡World Para Powerlifting organization donated Para powerlifting equipments of wroth 5000 Euro to National Para Powerlifting Sport Association - Nepal ( NPPSA-Nepal)⚡President of Nepal-Pakistan Friendship & Cultural Association Mr. Himalaya Shamsher Rana gives Away Pakistan Embassy Scholarships⚡मिस्टर एण्ड मिस नवलपरासी' को आवेदन खुला, अडिसन जेष्ठ १४ मा हुने⚡हेर्नुस् के छ आज देशभरिका मौसम पूर्वानुमान⚡बालेन साहले फराकिलो मतअन्तरसहित अग्रता⚡सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत हुँदै
प्रकाशित मिति : ७ भाद्र २०७८, सोमबार १७:१३
काठमाडौं, ७ भदौं । डिबी गुरुङको रचना, संगीत तथा स्वर रहेको ‘आयौं हामी चारतारे बोकेर, जय नेपालको सलाम ठोकेर’ बोलको गीतको म्युजिक भिडिओ सार्वजनिक भएको छ । गीतमा गुरुङको साथै अर्जुन सुनाम र टिका पुनको पनि स्वर रहेको छ । आज (सोमबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा नेपाल सांस्कृतिक कलाकर्मी संघ राष्ट्रिय समितिले आयोजना गरेको ‘विमोचन समारोह–२०७८’ मार्फत कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, केन्द्रीय सदस्य तथा अनुशासन समितिका संयोजक भीष्मराज आङ्दाम्बे, प्रतिनिधिसभा सदस्य सुजाता परियारलगायतले गीतको भिडिओ विमोचन गरेका हुन् । कार्यक्रममा रमाईलो टिभीका सञ्चालक तथा सञ्चारकर्मी दयाराम पाण्डे, नेपाली कांग्रेस दोलखाका कोषाध्यक्ष तथा नेपाल सांस्कृतिक संघका पूर्व प्रवक्ता कृष्ण केसी, महाधिवेशन प्रतिनिधि भगवती थापा, तेजप्रसाद रिजाल, म्युजिक भिडिओका निर्देशक लिगेस भट्टराई र नृत्य निर्देशक बुद्धिराम खड्काको उपस्थिति थियो ।
कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उक्त गीतको सपलताको कामना गरेका छन् । उनले भने,‘कलाकर्मी साथीहरुले यो गीत ल्याउनुभएको छ, यसमा मेरो शुभकामना छ । बास्तवमा गीत, संगीतमार्फत हुने सञ्चार शक्तिशाली हुन्छ । कम्युनिष्टहरुले धेरै अगाडिदेखि संगीतमार्फत भावना जनतामा पुर्याए । संगठन निर्माण गरे । यद्धपी उनीहरुको राजनीतकि व्यवहार भने उल्टो थियो । जनता सरल थिए । सोझा थिए, त्यसैले उनीहरुको कुरालाई केही समय त पत्याए ।’
डा.महतले एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा बहुमतसहित सरकारमा आएपनि सरकारको नेतृत्व गरेको व्यक्तिले कामभन्दा बढि गफ गरेको स्मरण गराए । उनले भने,‘त्यो सरकारबाट आश्वासनको पोका मात्रै बाँड्ने काम भयो । बोल्ने एउटा अनि गर्ने अर्कै गरे, त्यो मिथ्या रहेछ । जनतालाइृ झुकाउने काम मात्रै गरे । हामी कांग्रेस काम गर्छौं । तर, जनतामा यो पुग्दैन् । तर, कम्युनिष्टहरु भने हामीले गरेको भन्दै जनतामा पुग्छन् ।’
महतले आगामी निर्वाचनमा जनताको मन छुने गीत÷संगित लिएर जानुपर्ने बताए । उनले भने,‘हामीले त काम नै गरेको हो नि । जनताको सेवामा केन्द्रित भएर कांग्रेस समर्पित हुनुपर्छ । भाषणको जति प्रभाव हुन्छ, त्यो भन्दापनि सयौं गुण बढि प्रभाव गीत तथा संगितको हुन्छ । अहिले कांग्रेको सरकारले यसअघिको सरकारले बिगारेको राजनीतिलाई सही ट्रयाकमा ल्याएको छ। हाम्रो यो सरकार आकाश र पातालको कुरा गर्दैन । बरु, जनताको आवश्यकत्ता प्राथमिकतमा केन्द्रित भएर काम गर्छौं । यही प्रण प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको छ ।’
उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोभिडबाट देश र जनतालाई बचाउने भनेर सार्वजनिक रुपमै प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको सुनाए । उनले भने,‘उहाँले सबै जनतालाई खोप सुनिश्चित् गरेर संक्रमणबाट मुक्त गर्नुपर्छ भन्नुभएकोछ । सामाजिक जीवन सहज बनाउने दायित्व हो । भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण गर्ने हो । कांग्रेस फरक हो भनेर देखाउँछौं । संस्थागत भ्रष्टाचारको अन्त्य र व्यक्तिगत लोभलालच पनि गलत हो भनेर देखाउँछौं । साधन र स्रोतले भ्याएसम्म हामी काम गर्छौं ।’
कांग्रेसले कमयुनिष्टबाट सिक्ने दुई वटा कुरा भएको पनि उनले उल्लेख गरे । पहिलो कुरा भनेको संगठन निर्माण र अर्को प्रचार भएको उनको भनाई छ । उनले भने,‘हामीले कम्युनिष्टलेजस्तो झुठो प्रचार गर्न आवश्यक छैन् । तर, गरेको कामको प्रचार त गर्नुपर्यो नि ।’
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा अनुशासन समितिका संयोजक भीष्मराज आङदाम्बेले पनि गीतको सफलताको कामना गरे । उनले भने,‘आज कांग्रेससँग सम्बिन्धत पार्टीको गीत विमोचन भयो । यो खुशीको विषय हो । कलाकर्मी साथीहरुकै माध्यमबाट आज लोकतन्त्रप्रति गीत र संगीतमार्फत हिमाल, पहाड र तराई चिनाउने काम भएको छ । म कलाकर्मीहरुलाइ उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु ।’
उनले कम्युनिष्टहरुले गरिबको गीत गाएर मन जितेको पनि स्मरण गराए । उनले भने,‘कम्युनिष्ट हृदयदेखि गाँसिएको नाम होईन । अहिले कांग्रेस ईतिहासकै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेर आएको छ, हाम्रो पार्टी सरकारमा छ । दुई तिहाईको मत पाएको नेकपाले सरकार चलाउन सकेन । ठट्टाठट्टै गर्दा तीन वर्ष विताउने काम गर्यो । हामीभन्दा अघिको सरकार त माँत्तिएको हात्तीजस्तै देखियो । त्यसैले ६१ जनाको टाउको बोकेर १०४ जनाको समर्थनसहित कांग्रेस आज सरकारमा छ । हामी सरकारमा छौं।’ उनले सरकारले देश र जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्ने पनि विश्वास दिलाए ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य सुजाता परियारले पनि गीतको सफलताको कामना गरिन् । उनले भनिन्,‘डिबी गुरुङको राजनीतिक, सामाजिक, सांगितीक यात्रा लामो समयदेखि चलिरहेको छ । उहाँको योगदानको म उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु । नेपालको हरेक आन्दोलनमा गीत, संगितले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।’
उनले आज विमोचन गरिएको उक्त गीत नेपाली कांग्रेसलाई बलियो बनाउने सहयोगी हुने पनि बताईन् । उनले भनिन्,‘यो गीतको माधयमबाट कांग्रेसलाई सशक्त बनाउने र गाउँ, कुना, कन्दरा र विश्वमा पुर्याउने भन्ने लागेको छ । यो गीत हरेक नेपाली जनताको मन मनमा पुग्ने छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । कांग्रेसको सन्देशमूलक गीत भएको महशुस गरेको छु । अझै जनतामाँझ पुगोस । मेरो सफलताको शुभकामना छ ।’
कार्यक्रममा बरिष्ठ गायक, संगीतकार तथा गीतकार डिबी गुरुङले गीत विमोचन कार्यक्रममा सहभागीहरुप्रति आभार व्यक्त गरे । उनले कलाकारलाई पनि पार्टीले उचित जिम्मेवारी दिनुपर्ने सुझाए । उनले कांग्रेसमा अब कलाकारको मर्म र भावना बुझ्ने नेतृत्व आओस भन्ने ईच्छा व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य भने नेपाल सांस्कृतिक कलाकर्मी संघका महासचिव सुरेन्द्र तिमिल्सिनाले राखेका थिए । त्यस्तै, कार्यक्रमको सञ्चालन भने रोल्पा–काठमाडौं सम्पर्क समितिका सभापति गणेश सुवेदीले गरेका थिए ।
उनले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुअघि भनेका थिए–
अचेल देश देशजस्तो छैन किन होला ?
अचेल नेता नेताजस्तो छैनन् किन होला ?
जताततै उखान टुक्का चल्न थालेपछि
अचेल कांग्रेस कांग्रेसजस्तो लाग्छ ।
रामेछाप कि सुमिता तामाङको साइप्रसमा उपचार कै क्रममा निधन।
World Para Powerlifting organization donated Para powerlifting equipments of wroth 5000 Euro to National Para Powerlifting Sport Association – Nepal ( NPPSA-Nepal)